Ufuna amazinga e-inthanethi ekhaya? Yonga ngesilinganiso sakho ngalezi zinhlinzeko | Izindaba zamagajethi
Amanani we-inthanethi ukuzulazula nokugcina
Esikhathini esingengakanani esidlule, izinketho lapho kuqashwa i-inthanethi bezimbalwa kakhulu. Ukuxhumeka okuhamba kancane kwe-ADSL okusenze sancama ukuzama nje ukufinyelela ikhasi lewebhu. Ngenhlanhla, amanethiwekhi we-Intanethi athuthukile futhi manje afinyelela isivinini esifinyelela ku-1Gb. Kepha njengokujwayelekile, lapho kunezinketho eziningi ongakhetha kuzo, kulukhuni kakhulu ukuthola inketho elingana ngempela nesikufunayo futhi esivumela ukuthi siyonge. Ngakho-ke, namuhla sizokwenza uqhathaniso phakathi kwamanani we-inthanethi angcono kakhulu ukusefa ekhaya bese ugcine ngasikhathi sinye.
Ukunikezwa okuhle kakhulu: Ikhaya Fibre 100Mb Orenji
Imali ebiza kakhulu: I-fiber yomsebenzi kuphela
Izinga eliphelele kakhulu: I-100Mb Fibre Yeselula
Izinga le-inthanethi elihamba phambili: I-YoMb's 100Mb Fibre
Manje njengoba sesazi ukuthi ukuqasha i-inthanethi ekhaya ngaphandle kocingo lwasendlini, eshibhile futhi ngaphandle kokuhlala unomphela kuyizinketho ezikhona ngempela, sekuyisikhathi sokungena odabeni futhi uhlaziye ngokujule ngamanani ngamunye anikezwa opharetha. Usukulungele?
IMovistar Ixhuma i-300Mb Movistar 300Mbps € 38 / ngenyanga
I-Lowi Fiber eyodwa 100Mbps € 29.95 / ngenyanga
IVodafone Fibre 300Mb 300Mbps € 30.99 / ngenyanga
Ikhaya Fibre 100Mb Orenji 100Mbps € 30.95 / ngenyanga
100Mb Fibre kusuka eMásMóvil 100Mbps € 29.99 / ngenyanga
I-YoMb's 100Mb Fibre 100Mbps € 32 / ngenyanga
I-100Mb fiber enezingcingo ze-Jazztel 100Mbps € / ngenyanga
1 Lowi, inketho kule Vodafone OMV
2 IMásMóvil namanani ashibhile we-fiber
3 Amanani we-Orange Home Fibra
4 I-Jazztel namazinga ayo amasha e-fiber
5 300 Mb ukuzulazula ngeVodafone
6 I-fiber engu-100Mb kuphela e-Yoigo
Lowi, inketho kule Vodafone OMV
Kuze kube muva nje, uLowi ubengenye yezindlela ezingcono kakhulu uma sifuna ukuqasha i-inthanethi eshibhile ngokumbozwa okuhle. Isebenza ngaphansi kwenethiwekhi yeVodafone, ngakho-ke ngaphandle kokuthi uhlala endaweni efihlwe kakhulu, ungazuza ngokumbozwa kwe-fiber ngaphandle kwenkinga. Intengo ingama-euro angama-29,95 kuphela ngenyanga, okuyisilinganiso esishibhile se-fiber emakethe.
Futhi uma intengo ibonakale iyinzuzo encane, kusekhona okuningi. Lesi silinganiso asinasiphelo, ngakho-ke singakwazi ukwehla noma ukushintsha noma kunini ngaphandle kokwesaba izinhlawulo noma izinhlawulo. Futhi ngeke basikhokhise ngokufakwa noma ngemalimboleko yomzila. Uma ngemuva kokufunda imininingwane yezinga le-fiber likaLowi ungakwazi ukulinda ukuthi uxhumano lwakho lusekhaya, uno-kuphela finyelela lesi sixhumanisi ukuze wenze isivumelwano nensizakalo yakho.
IMásMóvil namanani ashibhile we-fiber
Opharetha ophuzi uzimisele ukuguqula imakethe yezinga. Okwamanje, kubonakala kusendleleni efanele njengoba imicu yayo ye-fiber ne-ADSL iphakathi kwezinto ezishibhile. Nge- € 29,99 kuphela ngenyanga singajabulela ifayibha engu-100Mb nezingcingo ezingenamkhawulo kusuka ocingweni lwasendlini.
Kule mali eshibhile yanyanga zonke ngeke kudingeke sengeze okunye ngoba ukufakwa ne-router kumahhala ekubhaliseni okusha. Kepha uma kufanele sazi ukuthi sinezinyanga eziyi-12 sisebenza unomphela, ngakho-ke uma sifuna ukushintsha isilinganiso ngaphambi kokuphela kwalesi sikhathi, kuzofanele sikhokhe inhlawulo. Sikushiya lesi sixhumanisi ukuze usenze ngokushesha.
Amanani we-Orange Home Fibra
Uma sibheka ikhathalogi ye-Orange, sithole amazinga e-Home Fiber okuqasha i-inthanethi ekhaya hhayi okunye okunye. Lawa mazinga alungele labo abadinga ukugcina isilinganiso sabo samaselula ngaphandle kokuxhumeka kwabo ekhaya futhi bafuna nolayini wasendlini oshibhile. Ngokuqondile, kufaka phakathi izingcingo ezingenamkhawulo kuzintambo zasendlini kanye nemizuzu eyi-1000 yokushayela izingcingo. Futhi ngamalini? Kulungele i- € 30.95 ngenyanga konke.
Ngakho-ke uma sifuna i-fiber enokumbozwa kwe-Orange, kungcono ukuthi singacabangi ngakho. Qasha lesi silinganiso ngokushesha futhi kalula kusuka lapha.
I-Jazztel namazinga ayo amasha e-fiber
Ngemuva kokuwashwa kwayo kwezithombe, iJazztel iphakamise ukushintsha amazinga e-fiber esingawasayina. Ngaphezu kwakho konke, uma amanani e-Orange engasikholisi, ngoba asebenza ngaphansi kwenethiwekhi efanayo yokumboza. Uma kufanele sincome isilinganiso se-inthanethi kuphela kusuka ku-. I-Jazztel, enye yezinto ezinhle kakhulu kungaba isilinganiso nge-100Mb yejubane le-fiber ehambisanayo namakholi. Singayisebenzisa intambo yasendlini ngaphandle kokwesaba ukukhuphula izinga lethu, ngoba ifaka nezingcingo ezingenamkhawulo nganoma yisiphi isikhathi kanye nomqhubi.
Imali yakho yanyanga zonke ingama-euro angu-28,95 ngenyanga, kepha njengamanje sinenhlanhla. Okuthile okufanele sikukhumbule uma sicabanga ngokushintsha ukuxhumana kwethu kwe-inthanethi ekhaya. Ukucela eminye imininingwane noma ukwenza inkontileka eyodwa yamanani ayo, ngeke kudingeke wenze noma yini ngaphandle kokufinyelela lesi sixhumanisi.
300 Mb ukuzulazula ngeVodafone
Uma sifuna ukwenza i-intanethi nabasebenza ngokujwayelekile ukugwema izinkinga zokumboza, asikwazi ukukhohlwa ngeVodafone kanye nefayibha yayo ye-ONO. Sinezilinganiso ezimbalwa esingakhetha kuzo, kepha uma sifuna ukungasebenzisi imali eningi ngasikhathi sinye ijubane elihle le-inthanethi, isilinganiso esihle kakhulu ngokungangabazeki yiso I-Fiber Ono 300Mb.
Into enhle kakhulu ukuthi lesi silinganiso sinokunikezwa ngemali yaso yenyanga izinyanga ezingama-24, lapho sizokhokha kuphela i- € 39, songa ngaphezu kwama-euro angama-200. Ukuze ungaphuthelwa lokhu kunikezwa, okumele ukwenze nje finyelela lesi sixhumanisi ukuze usiqashe njengamanje.
I-fiber engu-100Mb kuphela e-Yoigo
Njengoba uYoigo engenile emakethe yezinga le-fiber, izinketho zezomnotho uma kukhulunywa ngokuqasha sezandile. Kumanani amathathu ahlinzekiwe, thina sincoma okuphakathi nendawo nge-300Mb, ikakhulukazi ngentengo nesivinini sayo.
Kumele sikhumbule ukuthi leli zinga uhlala izinyanga eziyi-12 futhi isijeziso esiphezulu okufanele sikhokhelwe uma singahambisani naso ngama-euro angama-100. Futhi ungakhathazeki, ngoba ukubhaliswa nokufakwa kumahhala futhi ngeke ube nezindleko ku-invoyisi yale mibono. Uma unentshisekelo ngaleli zinga, ungayiqasha ku-inthanethi kusuka kulesi sixhumanisi ngokushesha.
Njengoba ubonile, kunezinketho eziningi esinazo uma kukhulunywa ngokuqasha i-intanethi ekhaya. Futhi ngaphezu kwakho konke, izinketho eziningi ezisivumela ukuthi songe. Manje njengoba wazi ukunikezwa okuhle kakhulu kwamanje emakethe ku amazinga we-inthanethi, izinsalela ezinzima kakhulu kuphela. Khetha ukuthi iyiphi insizakalo ozoyiqasha. Uma ungaqiniseki, unethuba lokuvakashela i- Umqhathanisi wezintambo bese uthola okudingayo.